Muuqaalka muwaadinimada xiligii nebiga
Friday, 18 March 2016 04:18	Written by	Mumin Alim
Macnaha muwaadinimada waxa lagu saleeyay ummadda islaamka dhexdeeda xuquuq iyo waajibaad ku qoran Dastuur,iyadoo wada-noolaanshaha laga fogeeyay macnaha qabiilka iyo diinta ,waxana arintaa tusaale u ah Dastuurkii madiina ee rasuulku s.c.w kula heshiiyay reer Najraan.
1.Dastuurkii madiina .
Dastuurkii ugu horeeyay ee lagu qoray heshiiskii dhex maray muslimiinta iyo ehlu-kitaabka waxa uu xor ka dhigay caqiidada,fikirka,xuquuqda wada noolaanshaha ,waxana uu noqday Dastuurkii ugu horeeyay ee islaamku hirgeliyo.
Waxana Dastuurkaa hor-dhac u ahaa (magaca ilaahay ka dib , kani waa kitaab ka sugnaaday nebi maxamed s.c.w,waxana uu u dhexeeyaa muuminiinta iyo muslimiinta ka ahaaday quraysh iyo reer madiina iyo cid kasta oo kusoo biirta una hiilisa waxayna isku yihiin ummad iska xigta ummadaha kale sida heshiiskani markhaati ka yahay)bayhaqi ayaa kusoo saaray Sunan al kubraa 8/106,wa ibnu hishaam fi siirah 3/31,wa ibnu kasiir fi anihaaya.
Waxa nebigu s.c.w saldhig uga dhigay heshiiskan walaaltinimada muslimiinta ka dhaxaysa iyo xidhiidhka ka dhexeeya bulshada kale ee cusub,muslimiintuna inay isku yihiin hal ummad, waxa uu xor uga dhigay yuhuuda diintooda iyo maalkooda ,waxana uu kula heshiiyay inay wada difaacdaan dawlada cusub ee madiina .
Waxa Dastuurkaa madiina koobsaday isku duubnida muslimiinta iyo sugida xuquuqda iyo karaamada iyadoo lays hortaagay cadaw kasta oo debeda kasoo duula lana dhawro xoriyada dadka muslimiinta la nool ee raba si nabad gelya ah inay ula deganaadaan iyo waliba in laga wada shaqeeyo maslaxada guud iyo wixii wanaag u hor seedaya mujtamaca wada-nool) ka eeg kitaabka liddiini wal wadan ee uu qoray maxamed saliim al cawaa 66.
2.Heshiiskii nebiga s.c.w la galay reer Najraan.
Heshiiskani waxa uu magan gelyo siiyay Nasaaradii reer najraan ,waxana loo amaan siiyay nafahoodii,xoolahoodii,qabiilkoodii iyo goobahoodii cibaadada iyo culimadoodii.
Heshiiskaa waxa ku sugnaaday erayadan :(reer najraan iyo cida ay wataan waxay ku jiraan maganta ilaahay iyo rasuulkiisa dhiigooda ,maalkooda ,diintooda ,ganacsigooda ,raahibyadooda ,asaaqifadooda ,kooda maqan iyo kooda joogaba ,waxa yar iyo waxa badan ay haystaanba inaan la taaban karin).
Nebigu s.c.w bilawgii dawladiisaba waxa uu qeexay wada-noolaansha dhex maraya muslimiinta iyo ehlu kitaabka ,iyo qabiilada kala duwan ee ku hoos nool dawlada cusub,waxana uu cid walaba siiyay xuquuq dhamaystiran ,waana arin ka muuqata dastuurka uu u dejiyay ee xanbaarasanaa macnaha balaadhan ee wada noolaashaha .
Read 394 times	Last modified on Friday, 18 March 2016 04:45
More in this category: « Fariinta sunnaha nabiga ee wada noolaanshaha Muuqaalka xuquuqda muwaadinimada xiligii khilaafada toosan »
INSEPARABILITY OF PULLO-PULLAAKU AND PULLO LINGUISTIC IDENTITY IN NIGERIA